$ 2 milyan oo ka mid ah deeqaha gargaarka ee COVID ayaa hadda u furan macaash doonka - Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|$ 2 milyan oo ka mid ah deeqaha gargaarka ee COVID ayaa hadda ufuran kuwa aan macaash doonka ahayn
$ 2 milyan oo ka mid ah deeqaha gargaarka ee COVID ayaa hadda ufuran kuwa aan macaash doonka ahayn
Diirad saarida ururada ay hogaaminayaan iyo u adeegida bulshooyinka midabka midabkoodu waxay raadinayaan inay wax ka qabtaan saameynta faafa ee isu dheelitirka
OLYMPIA, WA - Cudurka faafa ee loo yaqaan 'COVID-19' wuxuu dhibaato aan horay loo arag ku reebay ururada aan macaash doonka ahayn, iyadoo qaar badan oo ka mid ah ay la soo derseen baahida loo qabo adeegyada iyo barnaamijyada iyadoo isla markaasna lala tacaalayo carqaladeynta adeegyada iyo barnaamijyada, joojinta qandaraasyada, qasaaraha maaliyadeed ee ka dhashay lacag uruurinta la joojiyay. , hoos u dhigista deeqaha iyo arrimaha kale ee saameeya shaqaalaha iyo awoodda tabaruce. Saameyntu waxay si gaar ah ugu adag tahay ururada aan macaash doonka ahayn ee ay hogaaminayaan una adeegayaan bulshada madow, kuwa asaliga ah iyo dadka midabka leh (BIPOC).
Warbixin dhowaan waxay muujineysaa sinaan la'aanta taariikheed ee maalgalinta ururada BIPOC inay sii qoto dheerto markay isku dayaan inay maraan jawaabahooda iyo soo kabashada COVID. Tani waa waqti isku mid ah xogta dhow tus jaaliyadaha midabbada leh ee gobolka Washington waxay la kulmayaan boqolkiiba boqol aad u saraysa kiisaska COVID iyo shaqo la'aanta. Kooxo dhowr ah ayaa leh kiisaska iyo isbitaallada jiifka 10 ilaa XNUMX jeer oo ka sarreeya kan dadka caddaanka ah, iyo heerarka dhimashada laba jeer ama ka badan saddex jeer ka sarreeya. Intaa waxaa sii dheer, falanqaynta gobolku waxay muujineysaa inay taasi run tahay dhammaan miyiga, magaalooyinka iyo xaafadaha magaalooyinka midabbada leh.
Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington waxay iskaashi la leedahay Philanthropy Northwest si ay u siiso $ 2 milyan oo maaliyad gargaar ah oo laga helo sharciga federaalka ee Coronavirus Aid, Relief and Security Security (CARES) iyadoo diiradda la saarayo hay'adaha aan macaash doonka ahayn ee ku saleysan bulshada iyo ururada Qabiil ee ugu saameynta badan COVID-19.
Codsiyada deeqaha waxaa la soo gabagabeynayaa Nofeembar 6, 2020. Raadi dhammaan macluumaadka iyo qalabka dalabka halkan.
Caawinta farsamada ama tarjumaadda ee deeqdan waxaa lagu bixin karaa iyadoo lala xiriiro bulshada.outreach@commerce.wa.gov. Kooxda wacyigalinta ganacsiga ayaa kaa caawin doonta inaad kugu xirto qof caawimaad leh.
Laba khadka tooska ah fadhiyada macluumaadka waxaa lagu qaban doonaa Ingiriis iyada oo loo marayo Zoom toddobaadkan:
Talaado, Oktoobar 27, 10 - 11 am PDT
Khamiista, Oktoobar 29, 7 - 8 pm PDT
Khadka shir weyne waa https://us02web.zoom.us/j/89880601482.
Aqoonsiga kulanka Zoom waa: 898 8060 1482.
Kala soo xiriir taleefanka 1-253-215-8782.
"Waan ognahay saameynta COVID-19 inay si aan dheelitirneyn u la kulmaan ururada ay hogaaminayaan una adeegayaan Madow, Asal ahaan, Aasiyaan - gaar ahaan Koonfur-bari Aasiya - Dhaladka Hawaii iyo Jasiiradaha Baasifigga, Latinx iyo bulshooyinka aan sharciga lahayn," ayay tiri Agaasimaha Ganacsiga Lisa Brown. Saameyntani waxay ka sii darayaan goldaloolooyinka jira iyo kala duwanaanshaha caafimaadka iyo ladnaanta qoysaska. Dadka iyo ururada bulshadu waxay ku tiirsan yihiin waxay u baahan yihiin taageeradan si ay uga shaqeeyaan bilaha soo socda una diyaar garoobaan soo kabasho cadaalad ku dhisan mustaqbalka. ”
"Philanthropy Northwest waxay ku faraxsan tahay inay la shaqeyso Waaxda Ganacsiga si ay u taageerto dadaalkan muhiimka ah," ayuu yiri Kiran Ahuja, oo ah madaxa Philanthropy Northwest. "Markii aan xoojineyno ballanqaadkeena wadajirka ah ee sinaanta, bixinta deeqaha dabacsan ee la mid ah taakuleynta howlaha guud ayaa muhiim u ah dib u dhiska iyo joogteynta bulshada midabada ku leh gobolka."
La shaqeynta la-hawlgalayaasha istiraatiijiga ah iyo waayo-aragnimada la-shaqeynta ururada maxalliga ah, Philanthropy NW waxay soo saartay astaamo dalab waxayna bixin doontaa deeqo u dhexeeya $ 25,000 iyo $ 50,000, iyadoo lagu saleynayo baahida ururka. Mudnaan gaar ah ayaa la siin doonaa barnaamijyada u adeega meelaha dhaqaale ahaan u nugul gaar ahaan kuwa miyiga, kuwa fog iyo kuwa qabaa'ilka ku nool oo madaxdoodu ay ka tarjumayaan dadka ay u adeegaan. Ururada yar yar iyo kuwa u adeegaya meelaha aan sharciga lahayn waxaa lagu dhiirigelinayaa inay codsadaan.
Gov. Jay Inslee wuxuu faray lacagaha CARES Act ee Wasaaradda Ganacsiga si ay uga caawiso dadaallada gargaarka ee COVID-19 Washington oo dhan. Hay'addu waxay u qaybisay in ka badan 700 milyan oo doolar maalgelinta CARES oo lagu taageerayo dawladaha hoose, qabaa'ilka, ururada samafalka ah, gargaarka guryaha iyo soo kabashada ganacsiga. Deeqahan cusub waxay qayb ka yihiin dadaal ballaaran oo lagu taageerayo ururada aan macaash doonka ahayn ee halgamaya. Ganacsigu wuxuu siinayaa wadar ahaan $ 7 milyan oo taageero aan faa'iido doon ahayn iyo la shaqeynta la-hawlgalayaasha bulshada si loogu qaybiyo lacagaha haray ee awoodda istiraatiijiyadeed.
← Gobolku wuxuu bixiyaa maalgelin si looga caawiyo kumanaan dad ah oo dheeraad ah gobolka Washington helitaanka daryeelka caafimaadka hab dhaqanka ee u dhow guriga Guddiga Hawlaha Dadweynaha Washington wuxuu oggolaaday $ 17.8 milyan oo loogu talagalay dhismaha khadka ballaadhista ee gobolka oo dhan →